DEG DEG: Roy Hodgson oo xilkii tababare ee England iska casilay – Gool FM
DEG DEG: Roy Hodgson oo xilkii tababare ee England iska casilay
Kaafi June 27, 2016
(Nice) 28 Juunyo 2016. Roy Hodgson waxa uu iska casilay xilkii tababare ee England kadib guul daradii 2-1 ahayd ee Isniinta ka soo gaartay Iceland.
Hodgson waxa uu shirkii jaraa’id ee uu qabtay kaddib kulanka ku aqriyey warbixin hore loo sii diyaariyey:
Waxa uu yiri: “Qandaraaskeyga mar walba wuu dhacayey Euro-ga kaddib, markaa hada waa waqtigii uu qof kale sii wadi lahaa horumarka da’yarta, gaajeysan ee hibada leh.
“Cajiib ayey ahaayeen waxa ayna sameyeen wax walba oo laga dalbaday.
“Markii aan imid, waxaa la ii sheegay in ciyaaryahanada aysan qarankooda u imaan si ay ugu dheelaan ama wey ka baxaan daqiiqda ugu dambeysa, laakiin ma arkin mid ka mida. Ciyaaryahanada wey jecelyihiin u ciyaarida dalkooda. Ka go’naanshooda ma ahayn mid su’aal laga keeni karo.
“Ray Lewington iyo Gary Neville waxa ay iga codsadeen in aan iyagana u hadlo. Aniga ayey ila yimaadeen iyaga oo qeyb ka ahaa kooxdeydii tababarka weyna ila tagayaan. Waxaan rabaa in aan uga mahadceliyo taageeradoodii iyo doorkii ay ka ciyaareen diyaarinta kooxda.
“Ugu dambeyn, waxaan ka mahadcelinayaa taageeradii shaqaalaha, ciyaaryahanada, FA-ga iyo dabcan jamaahiirta, safar cajiib ah ayuu ahaa afartii sano waana mid aan si farxad leh dib ugu soo jaleeci doono, ugu dambeyn, waxaan u mahadcelinayaa saxaafada aad ii siiseen afartii sano ee aan joogay.
“Waxaan ku xumahay in ay sidan ku dhamaatay, ka harida tartan kale laakiin wax yaabahan wey dhacaan. Waxa kaliya ee aan qof walba u rajeynayo ayaa ah waxa ugu wanaagsan iyo in la arko England oo ciyaareysa fiinaale tartan weyn waqtiga dhow.”
EURO 2016: ENG VS ICE 2-1...Iceland oo Ingiriiska ka dirtay Koobka Qaramada Yurub + Sawirro
LA JABSADAY: Qandaraaska uu Henrikh Mkhitaryan ugu wareegayo Manchester United iyo mushaarka uu ka qaadan doono Old Trafford